Madaxweyne Cabdullahi Yuusuf oo weli suurta gal u noqon la'dahay in ra'isul wasaaraha dibadda uu ka keeno iyo Cali Mahdi oo xusullo duubo ugu jira sidii ra'isul wasaare looga dhigi laha qof asaga uu wato. Ruunkinet 04/11/07
Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ayaa tibaaxaya in madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya uu si weyn u doonayo in dibadda laga keeno ra'isul wasaarahaiyo qaar ka mid ah golaha wasiirada.
Arrintan ayaa la sheegay in ay hortaagan yahay qodob ka mid ah dastuurka dowladda federaalka ah oo qeexaya in lagu ogolaado cod 183 xubnood oo ka tirsan golaha baarlamaanka kadib markii ay u codeeyaan arrintan.
Inta badan xubnaha golaha baarlamaanka ayaa si weyn u diidan in dibadda laga keeno ra'isul wasaaraha.
Madaxweyne Cabdullahi Yuusuf ayaa la sheegay in uu ku qanacsan yahay in dibadda laga keeno ra'isul wasaaraha in kastoo ay jiraan cadaadis dowladdo shisheeye oo saaran madaxweynaha kuna saabsan cidda uu ka dhigayo ra'isul wasaaraha dowladdiisa.
Dhanka kale, madaxweynahii hore ee Soomaaliya mudane Cali Mahdi Maxamed ayaa la sheegay in uu ugu jiro xusullo doob aad u weyn sidii looga dhigi lahaa ra'isul wasaare shaqsi uu wato asaga ama laftiisa in kastoo ay jiraan dad badan oo si weyn u diidan in Cali Mahdi laga dhigo ra'isul wasaare maadaama uu hore u soo maray xil ka weyn kaas laguna eedeeyay in wax badan uusan qaban.